काठमाडौंमा ६०९ सहित उपत्यकामा थपिए ७५५ जना नयाँ कोरोना संक्रमित — Sanchar Kendra
१ओली सरकारको जनतामारा निर्णयले कोरोना संक्रमितको बिचल्ली हुँदै, हेर्नुहोस प्रमाणसहित
२बालुवाटारबाट ४ बुँदे सहमति भएको विज्ञप्ति आएलगत्तै खुमलटारबाट बाहिरियो फेरि यस्तो बिज्ञप्ति
३बागमती प्रदेशमा दसैँ बिदामा पनि कोरोनाको परीक्षण र उपचार हुने
४जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष बने डाक्टर बाबुराम भट्टराई
५दशैँमा बैंकहरु खुल्छन कि खुल्दैनन ?
६कैलाली ह’त्या का’ण्डमा प्रहरीलाई पहिलो सफलता, असई र जवानको ह’त्या गर्ने ७ जना पक्राउ, दिए यस्तो बयान
७नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख ३९ हजार नाघ्यो
८नेपाली बजारमा कति छ आज सुनचाँदीको मूल्य ? घट्यो कि बढ्यो
९नेपालको आकाशमा आज राति देखिनेछ यस्तो अनौठो दृश्य
१०ओली-प्रचण्डबीच फेरी लफडा, बालुवाटारमा के भयो कुराकानी ?
११चार दिनपछि यस्तो अवस्थामा भेटियो कैलालीबाट बेपत्ता प्रहरी जवान रामबहादुरको श’व
१२कैलालीमा यसरी भएको रहेछ असई गोविन्दको बिभत्स ह’त्या, बाहिरियो प्रहरीको आधिकारिक धारणा
काठमाडौंमा ६०९ सहित उपत्यकामा थपिए ७५५ जना नयाँ कोरोना संक्रमित
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ७५५ जना कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा ६०९, ललितपुरमा ९५ र भक्तपुरमा ५१ जना संक्रमित भेटिएका छन् ।
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टा थप १ हजार ४९७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६९ हजार ३०१ पुगेको जनाएको छ ।
आज ४५७ जनाले कोरोनालाई जितेका छन् । योसँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संखया ५० हजार ४११ पुगेको छ । आज थप १७ जनाको ज्यान गएको छ ।
त्यस्तै वितेको २४ घण्टामा १७ कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४५३ पुगेको छ। यसअघि बुधाबार ७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
वितेको २४ घण्टामा ४५७ जनाले कोरोनालाई जितेर डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोनालाई जित्नेको संख्या ५० हजार ४११ पुगेको छ । यो ७२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । २४ घण्टामा ११ हजार ४४९ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये १ हजार ४९७ मा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।
अहिलेसम्म ९ लाख ५५ हजार ९२३ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । नेपालमा अहिले १८ हजार ४३७ जनामा संक्रिय संक्रमण छ । उनीहरुमध्ये ९ हजार ८२३ जना होम आइसोलेसनमा छन् । ८ हजार ६१४ संस्थागत आइसोलेसनमा छन् । क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या ६ हजार ५६५ छ ।